> Resource> DVD> Olee Ọkụ Podcast ka DVD
iTunes na-enye gị na ọtụtụ nde ndị free audo ma ọ bụ vidiyo pọdkastị, na-enye gị ohere ozugbo download ọkacha mmasị gị Podcast ngosipụta gị na kọmputa. Ọzọkwa, ị pụrụ ọkụ pọdkastị ka DVD bụrụ na ị chọrọ kwado ha, ma ọ bụ na-enwe ha na gị na n'ụlọ DVD ọkpụkpọ, ma ọ bụ conveniently nyefee ha ka ha ọzọ kọmputa wdg
Isure a Podcast ka a Data DVD, ị nwere ike ozugbo ime ya na iTunes. Ma mara na Data DVD naanị ike na-egwuri na kọmputa na ụfọdụ pụrụ iche standalone DVD ọkpụkpọ na-akwado data usoro nke DVD. Otú ọ dị, ọ dị ihe ọzọ yiri n'ihi na ị na-esure Podcast ka a video DVD maka playback on n'ụlọ gị gị na DVD ọkpụkpọ ma ọ bụ TV, nri? Ọ bụrụ otú ahụ, i kwesịrị a smart DVD burner - Wondershare DVD Onye Okike (DVD Creator for Mac) maka enyemaka.
Ọzọ, m ga-isi-egosi gị otú ọkụ ihe iTunes Podcast ka DVD na obi ụtọ na n'ụlọ DVD Player ma ọ bụ TV. N'ezie, ị nwekwara ike ịmụta otú ọkụ iTunes pọdkastị ka Data DVD maka ojiji. Ọ ga-agụnye abụọ n'akụkụ.
Nkebi nke 1: Olee otú iji tọghata iTunes Podcast ka video DVD
Nkebi nke 2: Olee otú iji tọghata iTunes Podcast ka Data DVD
Mbụ, ibudata, wụnye na-agba ọsọ a oké Podcast ka DVD burner.
Nzọụkwụ 1: mbubata gị iTunes Podcast video faịlụ ka a na ngwa
Pịa-acha anụnụ anụnụ gburugburu bọtịnụ na n'elu-n'akụkụ aka ekpe nke isi interface ma ọ bụ see Import button na nke ugbu a interface mbubata gị iTunes Podcast faịlụ. Ma ọ bụ ịchọta faịlụ na ị chọrọ na kọmputa ahụ na mbụ kpọmkwem ịdọrọ ha ka ha a na ngwa ekpe ebi ndụ.
Nzọụkwụ 2: hazie a DVD menu
Pịa NchNhr taabụ, wee họrọ otu DVD menu template hazie gị onwe gị DVD menu. Ọ bụrụ na ị chọrọ họrọ si ọzọ free menu ndebiri, dị nnọọ pịa green ala akụ button imeghe online akụ n'ọbá akwụkwọ.
Nzọụkwụ 3: Preview mmetụta na ọkụ Podcast ka DVD
See Preview taabụ ele ikpeazụ mmetụta. Ọ bụrụ na ọ bụ ok, dị nnọọ-anọgide na-pịa apa ọkụ taabụ. Mgbe ahụ, fanye a ide DVD5 ma ọ bụ DVD9 diski na pịa "Ọkụ" button na ala-nri akuku nke interface. Ọ gwụla. Mgbe ọkụ usoro na dechara a mgbe e mesịrị, e dere ede DVD diski ga-ajụ-akpaghị aka.
Were ya na ị nwere download nza nke video Podcast si iTunes ụlọ ahịa gị Podcast n'ọbá akwụkwọ. Iji tọghata iTunes Podcast ka data DVD, ị pụrụ ime ya ozugbo na iTunes. Nweta zuru ezu nzọụkwụ n'okpuru.
Nzọụkwụ 1: Pịa "+" bọtịnụ na ala-n'akụkụ aka ekpe nke isi iTunes window ike ọhụrụ playlist.
Nzọụkwụ 2: Gaa gị Podcast n'ọbá akwụkwọ ịhọrọ niile Podcast faịlụ na ị chọrọ ka ọkụ, na mgbe ahụ ịdọrọ ha ka ha ọhụrụ playlist na ị na dị nnọọ kere.
Nzọụkwụ 3: Fanye a ide DVD diski gị DVD-akwọ ụgbọala.
Nzọụkwụ 4: Gaa ọhụrụ playlist, na na ala-nri akuku nke ugbu a interface, i nwere ike ịhụ a "Ọkụ Disc" button. Dị nnọọ pịa ya na-emeghe "-ere Ọkụ Ntọala" window.
Nzọụkwụ 5: Họrọ "Data CD ma ọ bụ DVD" nhọrọ.
Ozugbo, iTunes ga-amalite ọkụ gị iTunes Podcast faịlụ ka a data DVD.
Olee otú Ọkụ VLC Videos ka DVD
Top Iri Best Linux DVD Players
Windows DVD Onye kere-adịghị arụ ọrụ? Nweta ngwọta ebe a
Olee otú iji tọghata WTV ka DVD